Liverpool oo guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Leeds United garoonka Anfield… +SAWIRRO – Gool FM
(Liverpool) 12 Sebt 2020. Liverpool ayaa guul dirqi ah kaga gaartay kooxda Leeds United garoonka Anfield, kulankeeda ugu horeeyay horyaalka Premier League kal ciyaareedkan 2020-21, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-3.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 3-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Liverpool.
Daqiiqadii 4-aad ee ciyaarta kooxda Liverpool ayaa heshay rigoore waxaana gool u badelay Mohamed Salah, dheesha ayaana sidaas ku noqotay 1-0 ay ku hoggaamineysay Reds.
12 daqiiqo marka ay dheesha aheyd Leeds United ayaa dhalisay goolka barbardhaca waxaana 1-1 ka dhigay Jack Harrison, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Kalvin Phillips.
Daqiiqadii 20-aad Liverpool ayaa markale hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii 2-1 ka dhigay Virgil van Dijk, waxaana goolkan ka caawiyay Andrew Robertson.
Leeds United ayaa markale heshay goolka barbardhaca daqiiqadii 30-aad kaddib markii 2-2 ka dhigay Patrick Bamford.
33 daqiiqo Mohamed Salah ayaa markale hoggaanka u dhiibay kooxdiisa Liverpool, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3-2.
Laakiin 66 daqiiqo marka ay ciyaartu aheyd Leeds United oo mucjiso ku noqotay Liverpool kulankan ayaa markii saddexaad heshay goolka barbardhaca, kaddib markii uu 3-3 ka dhigay Mateusz Klich, waxaana ka caawiyay goolkan saaxiibkiis Helder Costa.
Daqiiqadii 88-aad ee dhamaadka dheesha kooxda Liverpool ayaa heshay rigoore waxaana gool u badelay Mohamed Salah, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 4-3.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 4-3 ay kaga adkaatay Liverpool kooxda Leeds United oo marti ugu aheyd garoonka Anfield, Reds ayaana gacanta ku dhigtay saddexdeeda dhibcood ugu horreysay horyaalka Premier League kal ciyaareedkan ee 2020-21.